पाकिस्तानमा आत्महत्याको समस्या विकराल ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
डन डट कमको सर्वेक्षण
एजेन्सी । दक्षिण पश्चिमी एसियाली मुलुक पाकिस्तानमा प्रत्येक दिन १५ देखि ३५ जना व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको छ ।जसको मतलब हुन् आउँछ, हरेक एक घण्टामा कम्तिमा एक जनाको मृत्यु भइरहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्युएचओ)ले सन् २००२ मा लिएको एक तथ्यांकअनुसार प्रति एक लाखमा ७.५ जना व्यक्तिले आत्महत्याको कारण मृत्युवरण गरिरहेका थिए । अर्थात् त्यस वर्ष १३ हजार व्यक्तिले आत्महत्या गरे ।
सन् २०१६ मा गरिएको एक अध्ययनले प्रति एक लाखमा २.९ जनाले आत्महत्या गरेको देखियो । अर्थात सन् २०१६ मा ५,५०० व्यक्तिले आत्महत्या गरे । विज्ञहरुले यी दुई तथ्यांकको बीचमा अहिले पनि आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या रहेको अनुमान गरिरहेका छन् ।
यहाँ एक प्रोजेक्ट वर्क मार्फत ती व्यक्तिहरु समक्ष पुग्न खोजिएको छ- जो आफ्नो अन्तरमनको भावना अन्य व्यक्तिसामू पुर्याउन हिच्किचाइरहेका छन् ।
ट्रिगर चेतावनी : तल उल्लेख्य सामग्रीमा आत्महत्या र आत्महत्या प्रयासहरूको कथाहरूमा आधारित छ । कृपया सावधानीको साथ जीवनलाई अगाडि बढाउनुहोस् र संकटको अवस्थामा तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।
आत्महत्याको कारण र सन्दर्भलाई बुझ्न डन डट कमले डिसेम्बर २०१८ मा एक अनलाइन सर्वेक्षण गरेको थियो । जहाँ डनले आत्महत्या र आत्महत्याको प्रचलनको बारेमा भिजिटरहरुसँग आफ्नो निजि विचार र घटनाहरु साझा गर्न अनुरोध गरेको थियो । कुल ५,१५७ जनाले प्रतिक्रिया जनाएको उक्त सर्वेक्षणलाई तल एक आउटलाइन मार्फत देखाइएको छ :
३८ प्रतिशत बताउँछन् कि उनीहरु आत्महत्या गर्ने व्यक्तिसँग व्यक्तिगत रुपमा नजिक थिए ।
४३ प्रतिशत बताउँछन् कि उनीहरु आत्महत्या गर्ने व्यक्तिसँग परिचित हुने गर्छन् ।
४५ प्रतिशत बताउँछन् कि उनीहरुले आत्महत्याको बारेमा सोचेका छन्, तर गर्न भने सकेनन् ।
९ प्रतिशत बताउँछन् कि उनीहरुले आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए तर असफल भए ।
१. रेस्पोन्डेन्ट डेमोग्राफिक :
सर्वेक्षण अनुसार १८ देखि ४० वर्ष उमेर समुहका पुरुषहरु अधिक मात्रामा(७२.६३ प्रतिशत ) आत्महत्या गरिरहेका छन् । यस्तै १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाको आत्महत्याको दर(३.८ प्रतिशत), ४० वर्ष भन्दा माथिका १०.४९ प्रतिशत व्यक्ति रहेका छन् ।
२. तपाइँ आत्महत्या गर्ने व्यक्तिसँग व्यक्तिगत रुपमा नजिक हुनुहुन्थ्यो ?
सर्वेक्षणमा सहभागिता(प्रतिक्रिया दिने) जनाएका कुल व्यक्तिमध्ये ३८ प्रतिशत व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने व्यक्तिसँग व्यक्तिगत रुपमा आफू नजिक रहेको बताएका छन् ।
३. तपाइँ त्यस्ता व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ जसले आत्महत्याको प्रयास गर्यो तर बाँच्न सफल भयो ?
यस प्रश्नको उत्तरमा ४० प्रतिशत व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गरेका तर बाचेका व्यक्तिसँग आफ्नो राम्रो समबन्ध रहेको बताएका छन् ।
४. तपाइँले कहिल्यै आत्महत्याको प्रयास गर्नुभयो या गर्नेबारे सोच्नुभयो ?
यस प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा व्यक्तिहरु तीन हिस्सामा विभाजित भए । ९.१ प्रतिशतले आमहत्याको प्रयास गरेको तर असफल भएको बताए । ४५ प्रतिशतले आत्महत्याको बारेमा सोचेको तर हालसम्म नगरेको बताए भने ४५.९ प्रतिशत व्यक्तिले आत्महत्याको बारेमा सोचेर जीवन खराब नबनाउने बताए ।
५. तपाइँले त्यस्ता व्यक्ति देख्नुभएको छ, जो आत्महत्याको बारेमा कुरा गरिरहन्छ ?
यस प्रश्नको उत्तरमा ४५ प्रतिशत व्यक्तिले यो बताए- “हो, मसँग आएर मेरा नजिकका मानिसहरुले यस बारे कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरु आत्महत्या गर्न मन भएको बताउँछन् ।”
६. व्यक्ति आत्महत्याको बाटो रोज्न पुग्नुको मुख्यतः कारणहरु के-के हुन् ?
सहभागी मध्ये आधा भन्दा बढी यो बताउँछन् कि मानसिक बिमारी र वित्तीय समस्या नै आत्महत्या गर्नुको ‘उच्च सम्भावित’ कारण हो । सर्वेक्षण अनुसार सम्बन्ध विच्छेद निम्न सम्भावित कारणमा देखिएको छ ।
७. तपाइको विचारमा आत्महत्या गर्नु भनेको के हो ?
एकदम न्यून मात्रामा(८ प्रतिशत) व्यक्तिले आत्महत्या गर्नु अनैतिक कार्य भएको बताएका छन् । यद्दपी अधिक संख्याले आत्महत्या गर्नु भएंको निरीहताको संकेत(साइन अफ विकनेस्) शिवाय केहि नभएको बताएका छन् । साथै दु:खबाट विमुख हुने एक असल उपायको रुपमा ३६.२५ प्रतिशतको मत रहेको छ ।
८. कुनै पनि व्यक्ति आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुग्नुको पछाडि के-कस्ता कारणहरु हुन सक्छन् ? उसले सहयोग माग्न सम्म किन सक्दैन ?
यस प्रश्नको उत्तर दिँदै सहभागीहरुले यै बताए कि कुनै पनि साथ सहयोग कसैबाट पाउने आशा नहुनु र सामाजिक संरचना एवं दुर्व्यवहार प्रमुख रहेको बताए।
९.कुनै पनि व्यक्ति आत्महत्या गर्न खोजिरहेछ भने उसको मानसिक स्वस्थतालाई ध्यान दिँदै उसको ज्यान बचाउन सकिन्छ । यसलाई पेशागत हिसाबले अगाडी बढाउन नसकिएला ?
यस प्रश्नको उत्तरमा एक साझा विचार देखियो – “यो कार्य सम्पूर्ण व्यक्तिसम्म पुग्न सक्दैन साथै सम्पूर्ण व्यक्ति यस सेवाबाट लाभ लिन पनि असमर्थ हुन् सक्छन् ।”
(पाकिस्तानी सञ्चार माध्यम डन डट कमबाट )